Na echiche anyị na BetClic
BetClick bụ a bookmaker na ọnọdụ kemgbe 2005, na mba na ibu ya amaka na àgwà, dị ka ị pụrụ ịhụ n'ebe a. na Portugal, Ọ bụ nke mbụ kwadoro iji nweta gị ikike na 2016, nyere site Srij (Nnyocha na egwuregwu ụkpụrụ Service), maka online ịgba chaa chaa na ime. Na ikike 001 ọ dịghị obodo, BetClick na ya chọrọ ịghọ vinca karịa akwụkwọ na Portugal, malite ọgbọ nke Paris egwuregwu na Iberian obodo, ghara ikwu banyere ndị ọzọ na-asụ Portuguese mba.
pụrụ ịdabere na, ego siri ike na mgbe nile ọhụrụ, BetClick bụ eleghị anya a bookmaker ebe ị na-emeghe gị na akaụntụ. Gị na mbụ bonus nzọ enweghị ihe ize ndụ elu 50 € maka exclsivo ọrụ SportyTrader (na lieu of 20 €) Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma ahịa inweta ebe a. Iji-uru nke mmekorita ya na a pụrụ iche ego maka ọrụ SportyTrader, Bwin nzo ndebanye via a njikọ na anyị website. Onye ama ama bookmaker nwekwara kwagaa mpi, àjà nke kacha mma Paris ahịa, na ọtụtụ nhọrọ obere na ogologo okwu. Anyị na-ahụ dịghị ihe mere na-ala azụ!
Ọ bụrụ na i nwere otu akaụntụ BetClick, akpatre oge eruwo, dị nnọọ na-enwe welcome bonus debeere ọhụrụ ahịa. n'ezie, na-agbata n'ọsọ na o yiri ka na-ekwu € 20 na saịtị Betclic.pt. Otú ọ dị, dị ka ekwuola, Sportytrader ọrụ na-isiokwu nanị bonus ndekọ, na a nnọọ elu uru, 50 €. Ọ dị mfe, bụ bookmaker enye onye nke kasị mma bonus nke ahịa, enye ohere ka nzọ ruo € 50 enweghị ihe ọ bụla n'ihe ize ndụ na ike isi rite uru site a njikọ na anyị website.
Dị pịa na otu n'ime anyị njikọ Betclic.pt, imeghe akaụntụ na-eme ka gị na mbụ nzọ 50 €. Ọ bụrụ na a na-egbo, ruru, ga-amụba okpukpu abụọ ya ego dabere na akụkụ nke nzọ. Ọ bụrụ na ndị mbụ nzọ na-biri dị ka furu efu, BetClick IN-ezitere gị na ego. dị ka e kwuru, ihe ize ndụ bụ efu, gịnị mere na-nzọ a ibu ego karịa adịchaghị na-agba mbọ iji na-akwado. Maka ozi ọzọ, ahụ anyị nyochaa nke adịchaghị BetClick.
Dị ka ndị ọzọ online bookmakers ọtụtụ www.Betclic.pt bụ na o kwere omume ịkwụ ụgwọ ụzọ maka itinye ego. Ka ị nwere ike gosi na n'elu table, Ọ na-enye a na iri na abuo BetClick nhọrọ maka ha ego nke ụlọ akụ enyefe ụgwọ site kaadị, visa, Moneybookers, Neteller ma ọ Paysafecard. O doro anya na, igwe ndọrọ ego e echefubeghị. Tụnyere ịdọrọ ego gị player akaụntụ gị akụ, ị ga-enwe akụ nyefe ohere, bụ a pụtara ọkọlọtọ na isi mba ahịa na Portuguese. Sina, Ọ bụ ihe ndị kasị na kasị dịrị nchebe ụzọ a usoro.
The saịtị BetClick
Ihe ọzọ dị mkpa mgbe anyị BetClick analysis na-akọ na àgwà nke saịtị. Evidence na ndị ọzọ na isi ahịa, tupu eru na Portuguese ahịa, BetClick Paris na saịtị bịara dị ka onye ọsụ ụzọ na Portugal, ma ama a dị ịrịba ama na ahụmahụ, a pụrụ iche na mma na a nnọọ mma imewe, ọ ga-abụ na kọmputa version, ma ọ ama mbadamba. Otu n'ime ihe ndị kacha mma ugbu a na mba ahịa, ya interface dị mfe ma na-akpa ike, haziri ahazi na kensinammuo. Ndị kacha mkpa na-awụlikwa elu, dị ka kpọmkwem ikpe, n'ọkwá na ndị kasị mkpa sports. Miss-game ụzọ njem bụ inweta na a otu click, ma nweta ọrụ na akaụntụ ebe, banye, Ọ na-e-ọma chere si, na mfe. The red ma chaa isi awọ na agba dabara nnọọ na a na-acha ọcha ndabere, na ejedebe na-enye a aka nke klas na bettor ahụmahụ. n'eziokwu, ọ bụ ike ime mma.
BetClick na-akara: otú ọ na-arụ ọrụ
Dị ka ihe niile bookmakers BetClic ọtụtụ iwu nke Paris, Srij eso ụkpụrụ nduzi na pụrụ izo ozugbo na saịtị Betclic.pt. abụkarị, ndị a iwu nwere ụfọdụ mgbagha, ma onye ọrụ a ga-mara tupu otu hypothetical nzọ ezere ịtụnanya. n'ihi na ihe atụ, cheta na, ka football ma ọ bụ basketball ndị kasị ewu ewu na otu egwuregwu, i nwere na-ekewapụ ndị n'ihi nke dabara oge, mmezi oge ma ọ bụ ntaramahụhụ ịse nkekọ. iji gosi: ma ọ bụrụ na ị na nzọ na Real Madrid na mmeri megide Dortmund na-agbachitere Njikọ, na na Real Madrid ga-emeri mgbe mmezi oge, nzọ gị ga-aba. na nke a, Ị kwesịrị kwadoro ndị nzọ “Real Madrid ka” na a ala puru, ma o yikarịrị ka adị. The echiche bụ otu ihe ahụ na NBA idaha.
agbanyeghị, ka tule napụrụ ma ọ bụ mmerụ ahụ egwuregwu, n'agbanyeghị bookmaker na-eme ya site na mpempe ndebanye ndochi enweghị ihe ọ bụla nchegbu maka egwuregwu mgbe precedimento otú i nwere ike iyi ihe ikenenke. Ọ bụrụ na ị nzọ, n'ihi na ihe atụ, Neymar nzube ma ọ bụ megide Real Madrid, ma ọ gaghị malite egwuregwu, nzọ gị ga-laghachiri. Otú ọ dị, ga-abịa 90 nkeji, nzọ gị ga-nti n'ihi na ihe ọkpụkpọ nwere ike n'ezie ịbịa nzukọ. The nyere isi, ọbụna tennis. Na omume nke arụkwaghịm ma ọ bụ ndọrọ ego nke a player, na-elekwasị anya na-emeri afọ ojuju ga-kagbuo we laghachi na e jidere ya. Otú ọ dị, na chara ịkụ nzọ (ogologo oge), a nzọ na-eto eto nke ndorondoro na-apụghị weghachiri eweghachi, ọbụna ma ọ bụrụ na kwuru player uche, emecha, mbà n'iru ndorondoro. Ozi iburu n'uche tupu ịkụ nzọ.
Sports BetClick Paris
Dị ka na niile egwuregwu saịtị Paris, BetClick, ị doro anya na nnukwu nzọ ke egwuregwu na ọtụtụ ụzọ. BetClick ka nzọ ke a football akara, ọnụ ọgụgụ nke tent nke tennis ma ọ bụ nzukọ isi nke dị iche n'etiti abụọ franchises na NBA, erfietamente bụ omume, dị ka ha na-ahụ n'ụzọ zuru okè nkịtị nhọrọ na ahịa maka Paris sports . Total, e nwere ọtụtụ puku nhọrọ dị ụbọchị ọ bụla, àjà a pụrụ iche na-kachasị Ịgba Cha Cha ahụmahụ na a mmụba na-gị ego. N'aka nke ọzọ, Ị nwere na-egwu, BetClick bụ ihe kasị mma n'ime ihe e mere na mpaghara ebe a.
BetClick ka nzọ na egwuregwu dị iche iche
N'ịbụ-agaghị ekwe omume obordar niile nkọwa, anyị ga-atụle ụdị Paris chọrọ site BetClick. esi gbakọọ, emeghe ahịa na niile ọzụzụ nwere ọtụtụ na-ekwe ka diversify ya Paris maka a fun mgbe.
na football, n'ihi na ihe atụ, n'ofè classic Paris (dị ka ndị na-eto eto), na ọnụ ọgụgụ nke ihe mgbaru ọsọ na egwuregwu ma ọ bụ akara na ọkara, n'ihi na ihe atụ, Ha nwere ohere nzọ aha mgbe egwuregwu bụ ndị na ga-akara n'oge egwuregwu, ihe mgbaru ọsọ dị iche na oge ị na-emeghe akara ke egwuregwu dịruru ná njọ ma ọ bụ na a otu na-emeghe isi. na obere, ọzọ 80 nhọrọ maka ndị ahịa na-etinye ego nke Brazil Championship ma ọ bụ na-agbachitere Njikọ. Na nke a, Ọtụtụ asọmpi na-kpuchie site saịtị, ndị kasị (agbachitere Njikọ, Premier League, Bundesliga, World Cup ...), ndị ọzọ na osisi na (Austria, Argentina, US, ... ).
Ma basketball, a kwa, Ohere dị ukwuu, tanto NBA, na LPB, EuroLeague, na ndị ọzọ na reputable mba leagues. Iri na ise dị iche iche na Paris na-awa na a oge, si a ọnụ ọgụgụ nke ihe megide isi nke dị iche n'etiti abụọ ìgwè, akara na-aga n'etiti, ma ọ bụ nọmba nke ihe gbatara site a player. Ọ bụrụ na-amasị gị nzọ ke basketball, BetClick ị jupụta nkata. Enwe niile na-enye!
akpatre, na ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe niile nkọwa aka, mara Paris nyere na ego nke tennis dị, Ya mere, (Winner, ala akara, ọnụ ọgụgụ nke egwuregwu, nọmba a nyere set ...). The otu nwere ike kwuru banyere bọl, Rugby e voleibol, dị ka nke ọma dị ka ndị ọzọ egwuregwu a na saịtị Paris sports. All Paris bụ gị chọọ.
Paris na football BetClick
sports bettors site ọkachamara nzuzo n'ihi football ugbu a, nwere dị mkpa n'ebe bookmaker. Total, ọzọ 40 asọmpi maka Paris sports, gụnyere nke a kasị prestigious (agbachitere Njikọ, Europa otu, Premier League, La Liga, Premier League ...), ala nkewa (abụọ League, Serie B Championship ...), ma ọ bụ karịa osisi (Onye Belgium otu, Danish, Spanish, Argentinean, Greek, turkish ...). Ọ dị mfe, ihe nile nke na-ejikọ na ị chọrọ nzọ, na bookmaker ga izute gị na-atụ anya, ma na mmekọrita quotas, emeghe ahịa na interface ngosipụta.
Banyere Ohere Betclic.pt kpọmkwem website awade a dịtụ mbara ntule nke nzukọ nile, ikwe gị ka quotas mgbe nile n'etiti ndị kasị elu na ahịa. n'ihi na ihe atụ, n'oge anyị ule, na bookmaker nyere a iju ma 2.10 a merie maka Arsenal n'elu Chelsea, mgbe ọtụtụ asọmpi na-enye naanị a òkè nke banyere 2,00. Na quotas dị ka ndị ọzọ ebe, BetClick football ngalaba ga-abụ otu nke kasị mma na online egwuregwu Paris ahịa.
Live ọkụ BetClick
Ka nzo taa, BetClick-enye gị ohere ka nzọ na na egwuregwu na-aga n'ihu. Ihe mgbaru ọsọ dị mfe: iri fluctuations na quotas jirichaa gị nwere earnings. n'ihi na ihe atụ, ma ọ bụrụ na ị na-eso classic FC Porto – Benfica, na Dragons emeghe isi, ma ka kweere na Eagles nwee ike merie egwuregwu, ọ ga-abụ na-akpali n'ihi na ị na nzọ ndụ, kama ịtụkwasị a nzọ tupu egwuregwu, mgbe Ohere SL Benfica ga-ala. na-eji nwayọọ na-aga, Paris ndụ nwere ike ịga nke ọma, bụ na football, tennis, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ usoro oghe Paris.
Ma ihe ndị na-ebi ndụ game interface, Ọ na-e-ọma chere si, na mfe site na saịtị na-homepage (ndu “Direct” pịa ebe a ịnweta saịtị). Ị nwere ike n'otu ntabi-ahụ nzukọ malitere na nke ị na nzọ, emegide na afụ olu oghe ahịa gị Paris. mgbe, nyo ihe site mpi ma ọ bụ site na ịpị ozugbo na ihe omume nke gị nhọrọ, a video egwuregwu nkwanye ma ọ bụ a 3D animation (dị ka egwuregwu), M na-enye gị niile họrọ ahịa. A dịgasị iche iche dị na ha ngwa ngwa nhazi akwụsị, azọpụta a otutu oge maka ọrụ, mgbe na-enwe fun. Ọ bụ nanị otu nke kasị mma nyiwe na ahịa ka nzọ ndụ.
Anyị dị nnọọ echeta ụfọdụ Sporting ihe na-ohuru ndụ site video nkwanye na website a sporsbook. Nke a na nhọrọ na-enye ohere ka ị na-ọ bụghị nanị na nyochaa ndụ ụbọchị na kalenda ịkụ nzọ BetClick, ukpụhọde gị ndịna na n'ezie na oge na-eme ka ndị kasị nke bookmaker ịbanye ya ahuhu maka egwuregwu.
Kwa ụbọchị nke afọ, Ọtụtụ ihe na-ohuru na “TV BetClick” football na basketball na tennis na ndị ọzọ na egwuregwu. n'ihi na nke a, ị ga-mezue ndebanye. Isi ATP tournaments dị ka Australian Open, ga-maka tennis. Ọtụtụ football asọmpi nwekwara a nhọrọ (Bundesliga, League na Copa del Rey na Spain, Eredivisie, Onye Belgium otu ...), na otu bụ eziokwu na basketball (NBA, EuroLeague. ..), yana ke bọl (Euro, agbachitere Njikọ). Best of niile, ihe ndị ọzọ ahụ nwere ike nwere nsogbu Inweta na telivishọn, Ọzọkwa na burukwa (Volleyball agbachitere Njikọ, An Italian basketball usoro, NHL ...) BetClick. A uru nke BetClick, na video rutere n'oge 2018 Nke a na saịtị Paris sports. Equipment naanị, yie ihe ziri ezi ntinye ke ama bookmaker saịtị.
Ke adianade video / gụgharia na bonus 50 € dị na a njikọ, na-akọwa ihe mere na-emeghe otu akaụntụ a bookmaker online, BetClick ka wee na-eduzi gị ofụri isua, ọtụtụ ọwọrọiso ọrụ na uru oge na-eme ka gị na Paris. Anyị na-egosi na isi ebe a, ha na-abụghị nanị. Na mgbe a na koodu na-arụ ọrụ, chọpụta BetClick bonus koodu iji hụ na ị pụrụ ịnụ ụtọ kasị mma egwuregwu Paris.
Popular na egwuregwu, n'ọkwá bụ akụkụ nke Paris ke egwuregwu, ma mara BetClick. Kemgbe afọ, na bookmaker enye ahịa ọtụtụ uru, gosiri site dị iche iche ihe ịma aka na onyinye nile di iche iche. Gaa na anyị na saịtị niile n'ọkwá dị na “eluigwe na ala tennis Promoções'.No, American football ma ọ bụ egwuregwu, ụbọchị ọ bụla nke afọ, ọ dịkarịa ala otu ihe ùgwù dị ka online egwuregwu BetClick. nnukwu ichekwa aka na isi ihe, ike, n'ihi na ihe atụ, abụba-achọpụtazi adapts, ma ọ bụrụ na ihe ịga nke ọma ya Paris. na FreeBets (Paris akwụkwọ) 5 € na ndị ọzọ n'aka na usoro nwere ike amachi ize ndụ na oge kụrụ gị Paris. na Sportytrader, anyị na-amasị echiche.
Ego Ọ BetClick
Ọzọ echiche na e mepụtara na-adịbeghị anya na ụwa nke online egwuregwu bụ ego, na-asọpụrụ anyị na ya ọnụnọ BetClick. The echiche bụ mfe, mkpa ihe (ọtụtụ narị kwa izu), Ị nwere nhọrọ ịdọrọ na ntinye onwe ha ụzọ ha, na-ewere na ndị ọcha adịghị aga gị amara. Iji nweta a ghọtakwuo echiche, ma ọ bụrụ na ị na nzọ 50 € Kọrịnt merie megide Santos, ma 1-0 Kọrịnt amalite n'ime nkeji ise, ị nwere ike amachi mmebi naghachi ụfọdụ nke ulo oru mbo. Ọ bụ mgbe bara uru mara, karịsịa mgbe ị na-atụle isi ike nke irè emeri amụma na ụbọchị na-abịa.
Olee otú ọ bụghị iji chefuo ama multiple Paris, hụrụ n'anya egwuregwu si gburugburu ụwa? The echiche bụ igwuri egwu. Ị nwere ike ịhọrọ multiple ahịa na nzọ na ha n'otu oge ahụ. Gịnị bụ uru? The omume nke ndị dị iche iche họrọ Paris na-uba ọnụ! Nke a nweta na-enye gị uru nke dum n'ịkpa multiple ahịa na a ala n'ihe ize ndụ, ihe ga-akacha-zutere, n'ihi na a ukwuu ibu iju. Ebe a bụ a bara uru atụ: Ị chọrọ nzọ ke nnọọ obi abụọ duel n'etiti Manchester United na Chelsea, abụọ ìgwè ndị a yiri uru. Kama na-agba ọsọ buru oke ibu ihe ize ndụ, mmetụta obere obi ike na ihe ga-esi nke egwuregwu, n'ihi na ihe atụ, -ahụ ndị ọzọ na-emeghe Paris maka ihe omume a, nke ga-abụ otu narị.
maara, Otú ọ dị, ma English T ịkọrọ a ihe iji chebe onwe profaịlụ na-adịbeghị anya, dabere na kenkwucha nzere sikwuo ike. Ị nwere ike ịpụ na ikpochapụ ahịa 'N'okpuru 2.5 ihe mgbaru ọsọ’ uru 1,60. oke obere na-ekwesị a nzọ? Ahụ, sonyere na nhọrọ nke onye ma ọ bụ abụọ. Aliyah pụrụ ọbụna ịhụ a otutu Paris na ahịa niile tupu ịdenye na BetClic. ma ọ bụrụ na, dị ka anyị, Ọ chọpụtara na n'etiti abụọ tent, nnata na otu adịghị abụkarị ejighi, mgbe na-enweta n'ihi nke abụọ. The “Manchester United ma ọ bụ Olee”, nyere 01:25 nwere ike mezue. Ọ na-hụrụ na home otu na-emekarị akara? na-atụ! The ahịa “Obodo mkpara – abaghị uru 1,20 ọzọ 0,5 ihe mgbaru ọsọ nwere ike ịbụ ihe ngwọta. na ugbu a? Alụta a nzọ na ezi òkè 2,40 (1,60 x 1,25 x 1,20). Otú ọ dị, anyị nwere ike ikwu mgbe niile na-amụ ihe dị iche iche ihe, ma ọ bụghị nanị na-adabere ala uru nke mbak. Ya mere, biko egbula sports amụma nke anyị otu SportyTrader.
lezie, Ihe ọzọ dị mkpa mgbe anyị analysis gbasara ahịa nkwado ọrụ BetClick, nke n'aka nke bụkwa akụkụ nke ndị kasị mma nke na-asụ Portuguese ahịa. dịtụ zuru ezu, ga-ekwe ka ị na-eme niile kọntaktị ụdị ajụjụ na ịkụ nzọ saịtị, mgbe ị na-ahọrọ isiokwu na attaches gị ajụjụ. I nwekwara ike izipu ihe email na-esonụ email address: [email protected] oru oma ọrụ onye omume oge bụ n'ime 24 awa. Nke a na mgbakwunye na nke saịtị na-enye a FAQ n'ihi na onye ọrụ ugboro ugboro jụrụ ajụjụ na azịza ha. Ma, nke ahụ ọ bụghị ihe niile, e nwere bụ na ịgba chaa chaa saịtị a mkparịta ụka, site na nke i nwere ike inwe na kpọmkwem na kọntaktị na mkpara ga-ezute BetClick ajụjụ ma ọ bụ nsogbu hụrụ na saịtị. Azịza ga-enwe mgbe nile na ozugbo support bụrụ na nke mberede.
Ọ bụrụ na ị na-adịghị na otu akaụntụ BetClick, ma m chọrọ na-nzọụkwụ, a akụkụ bụ maka gị. Nzọụkwụ site nzọụkwụ, anyị ga-enye gị dị mkpa ntụziaka ịmepụta otu akaụntụ BetClick n'enweghị, na-enwe karịa bonus dị ma ọ bụ ọrụ a tupu ya mbụ home nzọ ịkụ nzọ. Anyị ga-eduzi gị, ime site na mobile version (mobile smartphones ma ọ bụ mbadamba BetClick), kọmputa gị, nzọụkwụ bụ otu.
Mepụta akaụntụ BetClick: otú ọ na-arụ ọrụ?
Mezue onye data
Ọ na-egosi gị akụ nkọwa
Mee ka gị na mbụ nkwụnye ego
Gosi na akaụntụ gị na achọrọ akwụkwọ
Nke a nzọụkwụ mbụ dị mfe, dị nnọọ tinye Bwin saịtị, n'ihu na ịpị black button “Deba aha ugbu a” ị ga-ahụ n'elu nri gị na kọmputa dị ka smart ekwentị (player icon ). Mgbe ị na-e, a na peeji nke na-enweta ozi nkeonwe gị gosiri. N'ihi na nke ikpeazụ, mara obere ozi ị na-enye ga-nzuzo na-echebe site bookmaker kacha mma technology.
Rijuru afọ na onye data
N'ikpeazụ, ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa nzọụkwụ ndebanye, na gị onwe onye data. Dị ka ị pụrụ ịhụ na n'elu image, dị iche iche na ozi a rịọrọ site na saịtị na-www.betclic.pt na-amalite na-emeghe akaụntụ gị. Ya aha ya aha otutu, ụbọchị ọmụmụ, address, email ma ọ bụ nọmba ekwentị, niile ozi na ị na-abanye na-mkpa definitively emere ebere gị onwe onye uwa odi mfe bookmakers. Nke a bụ tumadi maka gị zitere gị ebighị koodu, ka na-echeta na nyochaa izi ezi tupu ayak. Njehie-ya akụkụ nwere ike imebi set of niile nzọụkwụ, na ga-amalite ọzọ.
Ke ndidụk a nkwado koodu (nweta ifịk) ma ọ bụ na-agba a na enyi na-akwalite, mkpa ka ị họrọ na aha njirimara na paswọọdụ, oru oma na mfe icheta. Buru n'uche na abụọ ikpeazụ ozi mgbe ị na-chọrọ ịmata oge ọ bụla ị chọrọ jikọọ gị ịkụ nzọ akaụntụ BetClic. Ya mere, agbalị iji chọta ezi itule n'etiti complexity – dị mkpa iji chebe ohere gị na akaụntụ – na ala – echefula na paswọọdụ gị. N'elu ẹkụre nke a, jide n'aka na ị na-nke iwu afọ (akwụkwọ iji gosi ga-mkpa n'oge na mgbe), na ma ma ọ bụ na-enweta ozi na igbe mbata gị email. Gbaa a na ogbo, ịpị “Mepụta akaụntụ m. “ọzọ, ọrụ bụ otu ihe ahụ, ihe ọ bụla na ngwaọrụ na ha ga- (kọmputa, mbadamba, ama).
Tinye gị akụ nkọwa
Na nke atọ a na-adọ, ihe ọ bụla kwa mgbagwoju anya, n'ihi na ị ga-mezue data on gị akụ. Tupu ya agaa n'ihu nkọwa, anyị ka na-esi ọnwụ ebe ọ bụ na a data dịghị mgbe a ga-mara na saịtị ọzọ, na bookmaker naanị na-eje ozi ha dị ka a àkwà mmiri n'etiti gị onye ọrụ na akaụntụ na gị akụ BetClick. Ka nzọ ego ma ọ bụ ịdọrọ gị winnings, ndị a data na-n'ihu na-eji. The metụtara akụ kwesịrị, O doro anya na, ibu ọrụ na akaụntụ na BetClic.
Iji mee nke a, ị ga-dejupụta ọhụrụ ụdị na gị onwe onye ego ozi. M karịsịa IBAN, Ọ ga-nyere na aha gị akụ, BIC koodu / Ngwa, nke na gị na obodo obi (Portugal, Brazil, Angola ...). All ndị a ọcha ga-ahụ na ha na ha bụ akụ na nkwupụta, i nwere ike ịjụ gị akụ (zukọta, website, a nchekwa data ngwa ...). Mgbe ihe ndị a na ubi na-ejupụta, ka gị ịtọ gị egwuregwu ókè.
The nzube nke ikpeazụ, mara kacha enwe kwa izu-akwụsị bụ ngụkọta ego na bụ onwe-amanye ka a ịgba na nzọ ke BetClick izu, -enwe kwa izu ego ego onwe ya na-ekwe ka na-agba akaebe na akaụntụ gị na onye ọrụ izu, na ego nke akpaka Gọọmenti, ego na-akpaghị aka enyefere gị BetClick akaụntụ n'ime gị akụ, ozugbo nwetara ha uru. n'ihi na ihe atụ, bụ 1.000 € jupụta kwuru ubi, ozugbo ị iru 1.000 € uru, akaụntụ gị ga onwe player jupụta gị akụ. Ọ bụrụ na ị na-ezo aka a nnọọ ole na ole akwụsị na Paris, M ndụmọdụ gị ndị a ókè kacha. Otú ọ dị, mgbe niile na-eme ihe egwu egwuregwu, nke na-anaghị akwụsị na-anakọta ego site na akaụntụ BetClick.
Ugbu a, na gị football profaịlụ e kere na ndekọ na-okokụre, ọ bụ oge na-eme ka gị na mbụ ego nkwụnye ego BetClick. dokwuo anya, bụ nzọụkwụ na-enye gị ohere nyefee ego si gị akụ na akaụntụ gị BetClick, na-enwe ike eme ka gị na Paris sports. ebe a, Ọ bụ dịtụ mfe, enwe ka igosipụta ego nke ego na ụzọ ị chọrọ ime. n'ihi na ihe atụ, ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na-akwụ site kaadị, ị ga-mkpa aha nke njide, nọmba kaadị, ụbọchị nke Mmebi, na koodu nche (Security Code 3 mkpụrụ na azụ nke map). akpatre, ijide n'aka na-na-na kacha bonus of 50 €, ị kwesịrị ị na nzọ 50 € na gị mbụ egwuregwu. The kacha mma ga-abụ, mgbe, ịkwụnye a ego, logo ntinye, ma naanị ma ọ bụrụ na ị pụrụ ime ya. Njirimara gị ohere bụ otú na-emeghe ma itule, otú i nwere ike na-amalite ịkụ nzọ.
N'ikpeazụ abịa ikpeazụ nzọụkwụ nke aha na BetClick nwekwara nnọọ mfe zuru ezu, dị na mbụ. Dị nnọọ eziga sports saịtị Paris duplex idetuo gị kaadị na-akọwa na a oyiri nke gị akụ na nkwupụta njirimara. n'ihi na nke a, i nwere atọ nhọrọ: ma ọ bụ Site n'ibu scanned akwụkwọ ozugbo na saịtị www.betclic.pt (My Documents), ma ọ bụ i nwere ike na-ezite ya site na email ma ọ bụ site na post. Ozugbo akwụkwọ ọnọ, Anyị nwere ike na-eche maka nkwado koodu zitere BetClick, n'ihu na-edegharị na ngalaba “m Account”. Ihe niile bụ ihe njikere, nwere ike ibu a bookmaker BetClic!
Nnọọ uru nzọ n'ebe ọ bụla mgbe ọ bụla nke ụbọchị, mmejuputa Sports BetClick bụ otu ihe na-emeghe otu akaụntụ na na bookmaker. Dị ka android ma ọ bụ iOS BetClick, mobile bookmaker na-nnọọ emezu na ị ga-ahụ niile ọrụ awa site bookmaker gị website. Iji nweta ya, dị nnọọ gaa ozugbo na Betclic.pt ma soro ntuziaka nke bookmaker. Sina, Nke a mobile ngwa dị nnọọ mma BetClick maka ndị chọrọ nzọ ke nkeji abụọ tupu na-na ụgbọala a na ezinụlọ nri abalị ma ọ bụ n'oge a obere ezumike na-arụ ọrụ. mgbe, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ibudata mobile ngwa BetClick, biko.
BetClick nkwado koodu
Gịnị ka ị ga-na-mara banyere BetClick bụ na mgbakwunye na àjà niile codes nke afọ nke ọtụtụ amụọ ma ọ bụ nkwado koodu ọrụ SportyTrader, Ọ ga na-enye ya ahịa ọtụtụ free Paris niile afọ. Ke adianade ọrụ “Òkù a na enyi” Ọ-enye gị ohere iji mee ka ego na steeti na òkù a òtù ezinụlọ ma ọ bụ enyi imeghe akaụntụ, na-agọzi ya ahịa ịkụ nzọ maka iguzosi ike n'ihe ha na kwa arụmọrụ game bụghị ihe ọhụrụ. Ser bom kicker, ahịa na-ekwe nkwa!